प्रदेश नम्बर १ : वाम कि लोकतान्त्रिक,कसको मत कति ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रदेश नम्बर १ : वाम कि लोकतान्त्रिक,कसको मत कति ?
काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको सरगर्मी प्रदेश नम्बर एकमा पनि बढेको छ । पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर एकका ६ जिल्लामा चुनाव हुँदैछ । हिमाली र पहाडी जिल्लामा हुने पहिलो चरणको चुनाव राजनीतिक दलदहरु मत माग्न व्यस्त भइरहँदा चुनावी अड्कल बाजीहरु पनि सुरु भइसकेको छ ।
केन्द्रीय नेताहरुको उम्मेदवारीले पनि अन्यत्रको समेत ध्यान खिचेको छ । दोस्रो ठुलो मतदाता संख्या रहेको प्रदेश नम्बर एक मा दुई चरणमा चुनाव हुँदैछ । मंसीर १० र २१ गते हुने निर्वाचन मार्फत २८ जना प्रतिनिधिसभा र ५५ जना प्रदेशसभा सदस्य चुनिनेछन् । कांग्रेस र बाम गठबन्धन प्रतिस्पर्धामा देखिएपनि कतिपय क्षेत्रिय दल समेत चुनावी मैदानमा छन् ।
प्रदेश नम्बर एकका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरु ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु सहित सात जिल्लामा पहिलो चरणमा चुनाव हुँदैछ । झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, भोजपुर, उदयपुर र इलाम सहितका सात जिल्लामा भने दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुनेछ । चुनावमा २९ लाख ९३ हजार ७ सय ७४ जना मतदाताले भोट खसाल्ने छन् । चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त उमेद्वार जनताको घरदैलोमा पुगेर समृद्धिका सपना बाँडिरहेका छन् ।
२८ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागी २ सय ७ जना, ५५ जना प्रदेशसभा सदस्यको लागी ४ सय ७० जना चुनावी मैदानमा छन् । अन्य प्रदेशमा झैं प्रदेश नम्बर १ मा पनि बामगठबन्धन र कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धन बीच प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त मतको आधारमा सबै २ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा वाम गठबन्धन अगाडी देखिन्छ । उमेद्वारहरु पर्यटकिय सम्भावना भएका क्षेत्र, कृषी उत्पादनको सम्भावना र आधुनिकिकरण तथा औधोगिक विकासको मुद्धा लिएर मत मागिरहेका छन् ।
पर्यटकिय हिसावले प्रदेश नम्बर निकै सम्भावना भएको क्षेत्र हो । उत्तरी र दक्षिणी नाकासम्म सडक संजाल विस्तार भए त्रिदेशिय व्यापारको सम्भावना समेत यस क्षेत्रमा छ ।
स्थानीय तहको चुनावमा ६९ स्थानमा एमाले बिजयी हुँदा कांग्रेसले ५१ स्थानीय तहमा बाजी मारेको थियो । माओवादी केन्द्रले भने ९ स्थानीय तहमा बिजयी भएको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेता झलनाथ खनाल, कांग्रेस नेता विजय कुमार गच्छदार, डा। शेखर कोइराला जस्ता शिर्ष नेताहरु पनि यस प्रदेशबाट चुनावी मैदानमा भएकाले प्रदेश नम्बर एकको चुनावी प्रतिस्पर्धालाई चासोको रुपमा हेरिएको छ । पहिलो चरण अन्तर्गत प्रदेश नम्बर एकका ६ जिल्लामा हुने चुनावमा हरेक जिल्लामा कांग्रेस र वाम गठबन्धनका बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । वाम गठबन्धनमा आन्तरिक धोकाधडी नहुने हो भने स्थानीय तहको चुनावको मत र सांगठानिक संरचनाले गठबन्धन सबै ठाउँमा अगाडि छ ।
तप्लेजुङ्गमा एमाले सचिब योगेश भट्टराई चुनावी मैदानमा छन् भने भोजपुरमा एमाले नेता शेरधन राई प्रदेश सभामा प्रतिस्पर्धामा छन् । शेरधनले उम्मेदवारी घोषणा अघि नै मुख्यमन्त्रीको दावेदारी प्रस्तुत गरेका कारण पनि चर्चा र चासोको विषय बनेको छ ।
ओखलढुङ्गामा कांग्रेस नेता रामहरी खतिवडा र एमाले नेता यज्ञराज सुनुवार बिचको भिडन्तले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई रोचक बनाएको छ । संखुवासभामा एमाले नेता राजेन्द्र गौतम र मन्त्री दिपक खड्का बिचको चुनावी प्रतिस्पर्धाले पनि जिल्लामा चुनावको रौनक बढेको छ
पाँचथरमा समेत कांग्रेसका प्रभावशाली नेता भिष्मराज आङ्दम्बे चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ । केन्द्रीय नेताहरु नै उम्मेदवार बनेका कारण यी जिल्लामा चुनावी प्रचार समेत तिब्र भएको छ ।
दोस्रो चरण हेभिवेट भिडन्त
मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा प्रदेश नम्बर एकमा हेभिवेट नेताहरुको भिडन्त हुँदैछ । इलामबाट पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र सुवास नेम्बाङ, झापाबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला, सुनसरीबाट कांग्रेसका विजय गच्छदार, एमाले सचिव भीम आचार्यको उम्मेदवारी हुँदैछ । मोरङ्गमा कांग्रेस नेताहरु शेखर कोइराला, महेस आचार्य चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ भने लालबाबु पण्डित पनि मोरङ्गबाट लड्दै हुनुहुन्छ ।
यो बाहेक राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा प्रजातान्त्रिकका सुनिल बाबु थापा र माओवादी नेता गोपाल किराँती पनि चुनावी मैदानमा भएपछि यहाँको चुनावी सरगर्मी तातेको छ । स्थानीय तहको चुनावलाई हेर्दा मधेसका तीन जिल्लामा वाम गठबन्धन र कांग्रेसका बिचमा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । १७ स्थानीय तह रहेको मोरङ्गमा कांग्रेसलले ९ स्थानीय तहको प्रमुख पद जितेको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको एमालेले ५ स्थानीय तह जित्दा माओवादी केन्द्रले एक मात्रै स्थानीय तहमा विजय निकालेको थियो । फोरक लोकतान्त्रिकले एक र संघीय समाजवादी फोरमले एक स्थानीय तह जितेको मोरङ्गमा उपेन्द्र यादबको समेत उम्मेदवारी हुने छ । सुनसरीमा पनि वाम गठबन्धन र कांग्रेसकै बिचमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ ।
सुनसरीमा वाम गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रको खासै मत स्थानीय तहमा आएको छैन । जिल्लाका स्थानीय तह मध्ये एमालेले तीन वटा स्थानीय तहमा विजय हासिल गरेको छ । २ मा स्थानीय तह लोकतान्त्रिक फोरमले जितेको थियो भने एक स्थानीय तह संघीय समाजवादी फोरमले जितेको छ । भने ६ स्थानीय तहमा कांग्रेसले बाजी मारेको छ । धनकुटामा एमालेको प्रभाव राम्रो मानिन्छ त्यहाँका सातवटै स्थानीय तहमा एमालेले बाजी मारेको थियो ।
झापाको कुरा गर्दा झापामा वाम गठबन्धन र कांग्रेसका बिचमा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । झापामा ७ वटा स्थानीय तहमा एमालले प्रमुख पद जितेको छ । तीनवटामा राप्रपाले बाजी मार्दा एउटा स्थानीय तह माओवादीले जितेको छ । ५ स्थानीय तह कांग्रेसले जितेको छ । इलाममा ७ स्थानीय तह एमालेले जित्दा कांग्रेसले २ वटामा बाजी मारेको छ ।
‘टोटनह्यामबाटै सन्यास लिन चाहन्छु’
असनेपाल न्युज । टोटनह्यामका स्टार खेलाडी ह्यारी केनले आफ्नो करिअरबारे बोलेका छन् । उनले आफ्नो बाँकी समय […]
समलिंगी विवाहले मान्यता पाउने भएपछि अष्ट्रेलियाका विभिन्न स्थानमा स्वागतका कार्यक्रम
सन्जिव अर्याल, असनेपालन्युज, सिड्नी । अष्ट्रेलियामा समलिंगी विवाहले मान्यता पाउने भएपछि अष्ट्रेलियाका […]